Indawo yokuhlala yaseOverseas Avenue
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMalini
Indawo yokuhlala isembindini weBaroda. Ikufuphi neendawo zokutyela, iivenkile, i-INOX Multiplex, kunye nendlela enkulu ye-Inox. Uya kuyithanda le ndawo njengoko imitha yelanga yokuqala ifika ekhitshini, amagumbi okulala amabini kunye neBalcony. Le ndlu ihlala abantu abayi-6-8, inomoya kakhulu kwaye iyiflethi ephindwe kabini enegumbi elinye lokulala kumgangatho wokuqala kunye namagumbi amabini ongezelelweyo kumgangatho wesibini. Le ndawo ilungele izibini, abahambi ngezoshishino, iintsapho ezinabantwana, kunye namaqela amakhulu. Sikwahlala kwigumbi elinye.
Icwangciswe kakuhle kwaye ifakwe ngokupheleleyo. Indawo entle kakhulu. Esi sakhiwo sinonogada weeyure ezingama-24 kubasebenzi.
Indawo yokuhlala ikwesona sitrato senzekayo saseVadodara, ekwabizwa ngokuba yi-INOX Road. Umgama wayo wokuhamba ukuya kwiivenkile ezinkulu, iindawo zokutyela njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Malini
Ndiyafumaneka ukuxhasa ngayo nantoni na efunwa ziindwendwe. Ndikwathanda ukunceda ukwenza ukuhlala kwabo bekhululekile kunye nolwazi lwasekhaya. Sihlala kwigumbi elinye, ngoko sinokunceda ngayo nantoni na efunwa lundwendwe.